IKHITSHI ELINEZIQITHI EZIBINI (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Ikhitshi elineziqithi ezibini (Iingcamango zoyilo)
Ikhitshi elineziqithi ezibini (Iingcamango zoyilo)
Wamkelekile kwigalari yethu entle yoyilo enekhitshi elineziqithi ezibini kubandakanya indlu yangoku, yanamhlanje, indlu yasefama yanamhlanje, gourmet kunye nemibono evulekileyo.
Asinguye wonke umntu onendawo entle emakhayeni abo, ngakumbi ekhitshini labo. Kodwa kwabo banamakhitshi aphangaleleyo, ukuba neziqithi eziphindwe kabini ekhitshini kunokuba sisigqibo esisebenzayo nesisebenzayo esinokusebenzela inzuzo yakho.
Ngokuqinisekileyo ayinguye wonke umntu, kodwa ukuba unekhitshi elikhulu kakhulu, ukuba neziqithi zasekhitshini kabini kunokuba lukhetho olusebenzayo.
Kwikitshi emhlophe yanamhlanje emfanekisweni ongentla, isiqithi sekhitshi lesi-2 sisebenza njengendawo yokugcina eyongezelelweyo, kunye nendawo yokutya eqhelekileyo.
Ukusetyenziswa kweenkuni ezimhlophe ezipeyintiweyo kwiziseko zesiqithi kunye neekhabhathi ezimhlophe zohlobo lwe shaker zongeza umahluko owamkelekileyo kumgangatho wendalo womthi wom-oki ofumaneka kwikhitshi lonke. Oku kongeza ukufudumala, ukumema umoya kwindawo.
Uyilo lweKhitshi kunye neeIqithi ezimbini
Nazi ezinye zeenzuzo eziphambili zoyilo lokuba neziqithi zasekhitshini eziphindwe kabini:
Indawo eyongezelelweyo yokubala -Le yeyona ndawo iphambili yokuthengisa kwiziqithi zasekhitshini eziphindwe kabini, ngakumbi kwabo bathanda ukonwabisa, okanye abo bapheka ekhaya / babhaka, okanye baneshishini elincinci lokupheka / ukubhaka.
Ugcino olongezelelweyo -Iziqithi ezininzi zekhitshi, zithetha indawo yokugcina ngakumbi. Ungasebenzisa indawo yokubala yokugcina indawo enikezelweyo, okanye usebenzise isithuba sezixhobo ezongezelelekileyo ezinje ngee-oveni, iifriji zewayini, njl.
Isiqithi sesibini sekhitshi sisetyenziselwa ukugcinwa kunye nendawo yokutya eyongezelelweyo. Ingasetyenziselwa ikakhulu njengendawo yokutyela engacwangciswanga.
Itrafikhi yasekhitshini -Ukuba isicwangciso sakho somgangatho wasekhitshini sikhulu, ukuba nobume be-L kuphela okanye ubume be-U-Shape kuthetha ukuba unxantathu wakho wasekhitshini unokuba mkhulu kunokuba ucetyisiwe, uwenze udinise kwaye ungasebenzi kakuhle.
Ukongeza isiqithi sekhitshi kuya kunceda ukuqhekeza ubude obugqithisileyo bokuhamba ukusuka esiphelweni ukuya esiphelweni sekhitshi lakho, kwaye kuyakwenza uyilo lube nokusebenza ngakumbi ekusebenzeni.
Indawo yokutyela enikezelweyo -Abantu abaninzi bayathanda ukutya okanye ukonwabisa kwindawo yekhitshi, kwaye ukuba neziqithi zasekhitshini eziphindwe kabini kuya kukuvumela ukuba ube nekhawuntari enye enikezelwe njengendawo yokutyela.
Ukonwabisa - Isiqithi sesibini sekhitshi sinokuba yindawo enkulu yokonwabisa iindwendwe okanye ukudibana namalungu osapho ngelixa ulungiselela ukutya. Oku kubonelela ngendawo yokuba abanye bahlale kwaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi yasekhitshini okanye baxhonywe kunye nompheki.
Ukulungiswa kokutya -Iziqithi ezibini zinokusetyenziselwa ukwenza unxantathu osebenzayo wasekhitshini. Ukuvelisa kakhulu kwesi siqithi kungabekwa kufutshane nesinki yekhitshi, i-oveni kunye nefriji ngonxantathu osebenza ngokukuko.
Yongeza Ubuntu kunye noBuntu -Amakhitshi aneziqithi ezibini anokuvumela umntu ukuba ayile uyilo olwahlukileyo olume ngokwenene. Zama ukongeza Isiqithi sekhitshi esahlukileyo ukuba iziqithi zipeyintwe umbala owahlukileyo kunezo iikhabhathi zokuqala ukuyenza ibe ntle kwaye inike ukuziva kwesiko.
Izicwangciso zoMgangatho weKhitshi kunye neeIqithi ezimbini
Sebenzisa umbala owahlukileyo kwisiqithi sakho sasekhitshini yindlela elungileyo yokwenza iphalethi yombala elunge ngakumbi ekhitshini lakho.
Ezi iziqithi ezibini zekhitshi ibonisa zonke izinto zokubala ezimhlophe kunye neekhabhathi eziphambili, ezidityaniswe neziseko ezimnyama zesiqithi. Oku kunceda ukulinganisela ukujonga konke ngelixa uzisa indawo ekugxilwe kuyo ekhitshini.
Yintoni ebangela oku ikhitshi lokuvula Ikhitshi elingaqhelekanga kukuba esinye seziqithi zasekhitshini sinendawo yokutya yokutya.
Isiqithi sekhitshi lesibini asinayo isinki eyakhelweyo, kodwa ngokusetyenziswa kwetheyibhile ephezulu yokuhombisa, bakwazi ukwenza ukwahlula okubonakalayo kwendawo yokusebenza kunye nendawo yokutyela ekhitshini.
Le khitshi yanamhlanje ineendawo eziphambili Isiqithi semarble ekhitshini kunye nesiqithi sase bar esisiqithi sakusasa. Ngomnye umzekelo wokusebenzisa isiqithi sesibini sekhitshi njengotshintsho kwezinye iindawo kwigumbi.
Iikhabhathi zekhitshi le-walnut zinqunyiwe kodwa indawo yokubaleka ephezulu edityaniswe kwisiqithi sasekhitshini sesibini, yenza ukwahlula okubonakalayo phakathi kwekhitshi nezinye iindawo zesithuba.
Ukuba nesicwangciso somgangatho ovulekileyo kumakhaya amadala anekhitshi enesitayile esingaqhelekanga kunokuba ngumceli mngeni, ngakumbi ukuba uninzi lweziqwenga zefenitshala zakho zezangoku okanye zangoku.
Eli khitshi libonisa ikhitshi yesiFrentshi yasekhitshini eneekhabhathi ezimhlophe ezihonjisiweyo kunye nemiphezulu yeetafile zegranite emnyama. Kulo mzekelo, ukongeza kwezi ziqithi zibini kukho indawo yesibini yokulwa ngokubonakalayo ukwahlula indawo yekhitshi kwezinye iindawo zendlu ezinceda ukutshintsha ngokugqibeleleyo izithuba.
Iziqithi zakho zasekhitshini azisoloko zilingana. Kulo mzekelo, isikwere kunye nesiqithi sekhitshi esixande sasetyenziselwa ikhitshi. Isiqithi esisikwere sibekwe kufutshane nekhitshi lekhitshi kunye nefriji ukwenza ukulungiswa kwesidlo kube lula.
geriba lenyengane yegolide
Oku kuvumela ukungena okuthe tye ukusuka kwindawo yokutyela ukuya ekhitshini ngenxa yesithuba esikhulu phakathi kweziqithi zasekhitshini.
Sebenzisa umbala owahlukileyo kwisiqithi sakho sasekhitshini yindlela elungileyo yokwenza iphalethi yombala elunge ngakumbi ekhitshini lakho. Uyilo olukhulu lwekhitshi lwanamhlanje oluneziqithi ezibini lubonisa zonke izinto zokubala ezimhlophe kunye nekhabhathi eziphambili ze-beige, ezidityaniswe neziseko ezikwiziqithi ezingwevu. Oku kunceda ukulinganisela ukujonga konke ngelixa uzisa indawo ekugxilwe kuyo ekhitshini.
Kule khitshi yesitayile yakudala, ubeko olukhulu lwandiswa ngomxube wendawo yokugcina kunye nendawo ephezulu yokulwa.
Isebenzisa iziqithi ezibini zasekhitshini, enye ubukhulu becala kukulungiselela ukutya, kwaye enye sisixhobo sokuphinda sisebenzise ikhitshi, kunye nomqolo osetyenziselwa ukutya ikhawuntari, kunye nelinye icala lokugcina nokulungiselela ukutya.
Ikhitshi lisebenzisa indibaniselwano yeekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kunye neetafile ezimhlophe zokubala, njengoko yenza umahluko olungileyo kumgangatho omnyama weplanga.
Uyilo olunxulumene ngakumbi jonga kwigalari yethu ye Izimvo zesiqithi sekhitshi Apha.
ungalitshintsha ifani ungatshatanga?
Iindawo ezilungileyo zokuhamba ngoSeptemba ukuya kwiHoneymoon
isipho kumtshakazi kwintombi
iivenkile ezithengisa iilokhwe zontombi
unxibe ntoni kumtshato we-rustic
Imikhwa yomtshato yabazali bomyeni
Iindwendwe zetheko zeendwendwe zomtshato